राष्ट्रपतिको निर्णयलगत्तै किन मध्यरातमा बोलाइयो मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ राष्ट्रपतिको निर्णयलगत्तै किन मध्यरातमा बोलाइयो मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक?
राष्ट्रपतिको निर्णयलगत्तै किन मध्यरातमा बोलाइयो मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक?
दीप संञ्चार जेठ ८, २०७८ गते ०:५८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठक मध्यरातमा बोलाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावी खारेज गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको हो।
आकस्मिक बैठक बोलाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिने जानकारी विज्ञप्तिमार्फत् दिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले मध्यरातमा विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक आह्वान गरिएको गुरुङले बताएका हुन्।
यसअघि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेश गरेको दावी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने दावी गर्दै १ सय ४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका थिए।
ओलीले एमालेका १ सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जनाले आफूलाई समर्थन गर्न पत्र पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेश गरेको दावी नपुगेको ठहर गरेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीको यो निर्णयसँगै अब देश निर्वाचनमा जाने भएको छ। अब संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने पक्का भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार दुवै जनाको दाबी नपुगेको जिकिर गरेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रुपमा नमिलेको निर्णय लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।